Paartiin biyya bulchu IHADEG dura taa’aa isaa filate. Itiyoophiyaan nama haaraan wal barte. Hoogganaan biyyattii kanaa inni itti aanu Dr. Abiyyi Ahimed Oromiyaa keessatti garee bulchiinsa haaraa jedhamuuf miseensa.
Irra hedduu nama lammataa fi sadaffaa ta’uun tajaajilaniiru. Hamma yeroo dhiyootti itti aanaa prezidaantii Oromiyaa fi hoogganaa waajjira paartii dhaabbata dimokraasummaa uummata Oromoo turan.
Baatii tokko dura obbo Lammaa Magarsaa waliin jijjiirraa aangoo gochuu dhaan dura taa’aa DH.D.U.O ennaa isaan ta’an yoo xiqqaate akka ilaalcha paartii isaaniitti itti gaafatama ol aanaaf akka yaadaman, muummicha ministeeraa ta’uuf akka kaadhimaman mallattoon argame.
Kaleessa galgala immoo kun daran dhugoome. Namni gara boodaa turan fuula duratti achii as ba’an. Maddeen paartii biyya bulchuu VOAf akka mirkaneessanitti Dr. Abiyyiin kan dorgoman dura taa’aa DEHIDEN obbo Shifarraaw Shugguxee fi kan ADWUI Dr. Dibebretsiyoon G/Mikaa’el waliini.
Kan filataman immoo wal ga’ii mana marichaa irratti kan argaman 170 keessaa deggersa sagalee 108 argachuu dhaan ta’uu maddeenumti kun tuqaniiru.
Itti dhiyeenyaan dorgomaa isaanii kan turan obbo Shifarraaw Shugguxee sagalee 58 ennaa argatan durumaanuu fedhii dorgomuu hin qaban jedhamaa kan ture Dr. Debretsiyoon G/Mikaa’el immoo sagalee 2 argatan.